वीरगन्जबाट दुई बालक वेपत्ता : RajdhaniDaily.com -
Home प्रदेश प्रदेश २ वीरगन्जबाट दुई बालक वेपत्ता
वीरगन्ज । पर्साको वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नम्बर ४ विर्ताबाट करिब २५ घण्टादेखि २ जना बालकहरु बेपत्ता भएका छन् । शनिबार बिहान करिब ११ बजे घरबाट व्याडमिन्टन खेल्न भनी निस्किएका दवै बालकहरु अहिलेसम्म फेला नपरेका हुन् ।
वेपत्ता बालकहरु दुवै जना वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नम्बर ४ विर्ताका रहेका छन् । बेपत्ता बालकहरु मध्ये एक जना यातायात व्यवसायी जगरनाथ प्रसाद कलवारका छोरा शवेश गुप्ता (तेजस) र अर्का स्थानीय दीपेश शर्माको छोरा प्रनिश शर्मा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले जनाएको छ । कलवार राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ प्रदेश २ का अध्यक्ष पनि हुन् ।
प्रहरीको सूक्ष्म अनुगमन टोलीको सहकार्यमा खोजी कार्य अगाडी बढाइएको वडा प्रहरी कार्यालय विर्ताले जनाएको छ । अहिलेसम्म ती दुवै बालक फेला नपरेको वडा प्रहरी कार्यालय विर्ताका प्रहरी निरिक्षक राजेशराज पुरीले बताए । दुवै बालकहरु स्थानीय गौतम मा.वि. को कक्षा ६ मा अध्ययनरत छात्रा रहेको प्रहरीले खुलासा गरेको छ ।
विद्यालयका निकै जेहेन्दार र तिक्ष्ण बच्चाहरु शनिबार घरमा नै भएकै दिन हराएको खबरले निकै तनाव बढाएको विद्यालयले पनि जनाएको छ । दुवै बाबुहरु घरबाट बिहान करिब ११ बजे तिर बाहिर निस्केका थिए । अहिलेसम्म न घर फर्केका छन् न त कहीं कुनै जानकारी वा सूचना नै आएको छ ।
‘अहिलेसम्म बेखबर र तनावमा छौं’, वेपत्ता बालक मध्ये तेजशका बुबा जगरनाथ कलवारले बताए । ‘प्रहरीमा भने शनिबार साँझ नै उजुरी दिएर दुवै बालकको खोजी कार्य भइरहेको छ’, उनले भने । कसैले देखे वा फेला पारे नजिकको प्रहरी कार्यालय वा परिवारका सदस्यलाई चिन्ने महानुभाव भए जानकारी दिन पनि दुवै परिवारका सदस्यले अनुरोध गरेका छन् ।
विवेक विवश रेग्मी - July 1, 2020
इटहरी । इटहरीमा एकजना महिलामा कोरोना भाइरस पोजेटिभ देखिएको छ । इटहरी २० तरहराकी एक महिलामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको हो । इटहरी अस्पतालका इमरजेन्सी इन्चार्ज...
शिक्षा क्षेत्रमा चुनौती थपिँदै
बिचार डा. देवीप्रसाद आचार्य - August 20, 2020
केही समयअघि शिक्षा मन्त्रालयले १ भाद्रबाट विद्यालय भर्ना अभियान सुरु गर्ने र १५ भाद्रदेखि पठनपाठन सुरु गर्ने भनेको थियो । विभिन्न तहमा रोकिएका परीक्षा...
Not-to-be-missed एजेन्सी - September 15, 2020
मुम्बई । पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी स्टेज कार्यक्रममा व्यस्त रहने सन्नी लियोनी अहिले फुर्सदमा छिन् । न त कुनै नयाँ फिल्म छ न स्टेज...
यस्तो छ प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनको पूर्ण पाठ
आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, आज म आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा होइन, जनस्वास्थ्यको बारेमा विमर्श...
Editor-Picks आलोक यादव - October 4, 2020
सिरहा । बलात्कारको घटना गाउँमै पाँच लाखमा मिलाउने आठ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । सिरहाको बिष्णुपुर गाउँपालिका वडा नं. १ मा गएको १२...
Breaking News राजधानी समाचारदाता - September 18, 2020
काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि होम आइसोलेसनमा बस्नेको संख्या बढ्दै गएको छ । सरकारले लक्षणविहीन संक्रमितलाई घरमै बस्न भनेपछि होम आइसोलेसनमा...
यो पनि पढ्नुहोस ७ महिने बालकको मृत्यु पछि पूर्वपश्चिम राजमार्गमा टायर बालेर प्रदर्शन